कुन राशिको मानिसलाई कुन पेशा फाप्छ ? जागिर वा व्यापार ? - DerbyKhabar
कुन राशिको मानिसलाई कुन पेशा फाप्छ ? जागिर वा व्यापार ?
वृष राशिका व्यक्तिहरु अलि जिद्धी स्वभावका हुन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा शहनशिल क्षमता पनि प्रस्तुत गर्न सक्छन् । असल, इमान्दार, विश्वसनीय र राम्रो बानि भएकै कारण साथी बनाउनपनि यो राशिका व्यक्तिहरु लागिपर्छन् । कुनै नयाँ चीजमा ढल्किन यो राशिका व्यक्तिहरुलाई अफ्ट्यारो हुन्छ । किनकी यो राशिका व्यक्तिहरु परिवर्तनमा हतपत्त विश्वास गर्दैनन् ।यो राशिका व्यक्तिहरुलाई कृषि, बैंकिङ, चिकित्सा शिक्षा र निर्माण क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ ।
बृहस्पति यो राशिको देवता भएको कारणले नै यो राशिमा जन्मिएकाहरु बुद्धिमान् र ज्ञानले भरिएको हुन्छन् । मीन राशिका व्यक्तिहरुमा कलात्मक क्षमता राम्रो हुन्छ । मीन राशिका ब्यक्तिहरुको लागि पशुचिकित्सा, वकिल, आर्कीटेक्ट, संगीतकार, समाजसेवी र कम्प्युटर गेम डिजाइनर जस्ता पेशा राम्रो हुन्छ ।